UChincha kumjabulisile ukuqokwa kuBafana | Isolezwe
UChincha kumjabulisile ukuqokwa kuBafana
Isolezwe / 12 July 2012, 11:14am /
IPHINI lomqeqeshi weBafana Bafana uThomas “Chincha” Madigage (osesithombeni) uthe impumelelo yabo noGordon Igesund ongumqeqeshi omkhulu, izokwahlulelwa ngemiphumela abazoyitholela iqembu.
“Kusobala okufanele sikwenze okuwukutholela iqembu imi-phumela emihle, ukuthi sikwenza kanjani akubalulekile kodwa yona iyadingeka ngoba uma ungumqeqeshi wahlulelwa ngokuzuzile,” kusho uMadigage izolo ntambama.
Umadigage (41) ozalelwe e-Atteridgeville, eTshwane, nokumangaze abaningi ukuqokwa kwakhe njengephini lika-Igesund, uhlangane okokuqala izolo nozakwabo okuhlanganisa uSerame Lotsoaka naye oyiphini, nomqeqeshi wonozinti u-Alex Heredia.
ISafa inikeze u-Igesund umbandela wokufaka iBafana eNdebeni yoMhlaba eseBrazil ngo-2014 nokuthi iqembu okungenani lifike kowandulela owamanqamu ku-Africa Cup of Nations ezokuba kuleli ngonyaka ozayo.
“Kulo msebenzi esiwe-nzayo siphila ngakho ukubekelwa imibandela ngakho angikuboni kuthusa okufunwayo. Okusemqoka wukuthi sibenabo abadlali abangasitholela lokhu futhi nomqeqeshi uGordon unolwazi ekutholeni imiphumela,” kuchaza uMadigage.
Lo mqeqeshi ubesehlale iminyaka ecela eshumini kuSuperSport United lapho ebeyiphini likaPitso Mosimane owinele Amatsatsantsa izicoco kanye noGavin Hunt benqoba iligi kathathu kulandelana.
“Ngiswele amagama okuchaza indlela engizizwa ngayo ngokuqokwa kwami kulesi sikhundla. Bakhona abanye abaqeqeshi abebewufanele lo msebenzi ngakho ngizizwa ngikhethekile. Noma yimuphi umqeqeshi osemncane uphupha ngokuba umqeqeshi omkhulu noma asebenzisane neqembu lesizwe. Leli thuba ngilithatha njengelizongikhulisa, ukuba yingxenye ye-Afcon kukhulu kukodwa,” kusho yena.
Uthe kubuhlungu ukushiya kuMatsatsantsa kodwa unethemba lokuthi iqembu lisezandleni ezifanele.
“Ngibe neSuperSport isakhiwa njengoba isize yaba yiqembu elikhulu eliwina izicoco. Ngiyazi ukuthi iyiqembu elingamile ngomuntu oyedwa kanti isazoqhubeka nokuphumelela okuyikhona okuzongijabulisa kakhulu,” kusho uMadigage.
Umdlalo wabo wokuqala abazobamba kuwona amatomu no-Igesund bazowudlala neBrazil ekuhambeni ngoSepthemba 7.